जनप्रतिनिधिकै गाउँमा बिजोग : महिला छाउगोठमा ! - Sabal Post
जनप्रतिनिधिकै गाउँमा बिजोग : महिला छाउगोठमा !
२२ बैशाख २०७६, आईतवार ० बिचार / प्रतिक्रिया
दयाराम पण्डित/ बाजुरा – बडिमालिका नगरपालिका–१ का अध्यक्ष रामबहादुर कार्की, २ का अध्यक्ष डम्मर महत, ८ का अध्यक्ष प्रकाश रावल र ७ का अध्यक्ष धर्मराज पाध्याय बस्ने गाउँ र वडाका महिलाहरु परम्परागत रुपमा छाउगोठमा बस्दै आएका छन् । राम बहादुर कार्कीको गाउँ सल्लेना हो । उहाँको गाउँमा १ सय ११ परिवार बस्दै आएका छन् । सबै महिलाहरु महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा बस्ने गरेका छन् ।
प्रकाश रावल बस्ने गाउँ र वडाका महिलाहरु पनि छाउगोठमा बस्दै आएका छन् । त्यस्तै धर्मराज पाध्याय बस्ने रजातोली गाउँमा १ सय १५ परिवार बस्दै आएका छन्, महिनावारी भएको बेला सबै महिलाहरु छाउगोठमा बस्ने गरेका छन् । रजातोली गाउँमा २४ जना स्थायी, अस्थायी कर्मचारी र २ जना जनप्रतिनिधि छन्, तिनीहरुका महिलाहरु पनि महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा बस्दै आएका छन् ।
बडिमालिका नगरपालिका–२ मा पनि छाउपडी गोठमा बस्ने चलन कायमै छ । गोठ थोरै छन्, प्रथा चाहिँ रही आएको अध्यक्ष डम्मर महत बताउनुहुन्छ । ‘नगरपालिकामा सामाजिक कुरीति उन्मूलन गर्नका लागि नियम कानुन बनाउने र नियगमन गर्ने वडा अध्यक्षको गाउँमै नै छाउपडी प्रथाले जरो गाड्दै आएको छ, कसरी परिर्वतन हुन्छ’ –एक स्थानीयले वताए ।
बडिमालिका नगरपालिका ३, ४, ५ र ६ छाउपडी गोठमुक्त घोषणा भइसकेका छन् । वडा नम्बर १, २, ७ र ८ मा भने निकै ग्राहो भएको उपप्रमुख कविता विष्टले बताउनुभयो । वडा नम्बर ९ भने घोषणा हुने अन्तिम चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ । ती वडामा पनि चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको विष्टले बताउनुभयो । बडिमालिका नगरपालिकाले छाउपडी गोठ घोषणा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यी गाउँमा भने अझै महिलाहरु छाउगोठमै बस्ने गरेको स्थानीयले वताएका छन् । नगरपालिकाले अभियान सञ्चालन नगरेको हैन्, महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम र सामाजिक कुरीति अन्त गर्नका लागि युनिसेफले पनि यसैमा लगानी गरेको छ । तर छाउगोठ मुक्त गर्न निकै गाह्रो भएको महिला शाखाकी प्रमुख केशरी रोकायाले बताउनुभयो । बडिमालिका नगरपालिका १, २, ७ र ८ मा छाउगोठ रहेको जनाएको छ, अन्य कुनै पनि वडा एउटा पनि छाउगोठ नरहेको प्रहरीले जनाएको छ । बुढिनन्दा नगरपालिका–९ पाण्डुसेनमा गत पुस २४ गते छाउगोठमा अम्मा बोहारासहित उनका दुई छोराको मृत्यु भएपछि छाउपडि प्रथा उन्मुलनका लागि जिल्लाभरि बिभिन्न कार्यक्रम भए पनि यी बाजुराका गाउँहरु भने केही परिवर्तन आएको छैन् ।
विशेष गरी सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारी भएका बखत महिलाले घरभित्र बस्न नपाउने र गाई, भैँसीको गोठ वा छाउगोठमा अलग्गै बस्नुपर्ने कुसंस्कारलाई विधेयकले दण्डनीय मानेको छ । त्यस्तो कार्यमा बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर अहिलेसम्म भने कसैलाई कार्यवाही भएको छैन् । नेता जनप्रतिनिधि भाषणमा मुख चोख्याउँदै मख्ख, छाउपडी भने गोठमै बस्न बाध्य छन् । – नेपालसमाचारपत्र
टिपरको ठक्करबाट एक युवकको मृत्यु भएपछि उनकी…
भवन तथा शहरी बिकास कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख…